सासू र बुहारीको भिडियोले विश्वभर तहल्का , के गरे त्यस्तो ? - Khabar Nepali
होमपेज / रोचक / सासू र बुहारीको भिडियोले विश्वभर तहल्का , के गरे त्यस्तो ?
सासू र बुहारीबीचको सम्बन्ध प्रायः राम्रो हुँदैछ । अपवादबाहेक अक्सर सासू–बुहारीबीच त’ना’ब भइरहेको हुन्छ । यस्तै एक घटना भारत हरियाणाको गुरुग्रामको राजेन्द्र पार्क क्षेत्रमा देख्नमा आएको छ । त्यहाँको एक घरमा बुहारीले आफ्नी बिरामी सासूलाई पि’टे’की हुन् । त्यस घटनाको भिडियो दुई दिनदेखि भाइरल भइरहेको छ । शनिबार, प्रहरीले त्यस प्रकरणमा दुबै पक्षबाट आएको उजुरी दर्ता गरेको छ । अंशु जिन्दालले प्रहरीलाई बताएकी छिन् कि उनी घरको माथिल्लो तलामा बस्छिन्, जबकि बुहारी र बच्चाहरु पहिलो तलामा बस्छन् । बुढेसकाल र रोगको कारण, उनी अब काम गर्न सक्दिनन् ।
त्यसैले छोरालाई कामको लागी एक घरेलु सहयोगी राख्न भनेकी थिइन् । त्यस विषयमा बुहारी कविता रि’सा’ए’की हुन् । कामदार ल्याउने कुरामा चित्त नबुझेपछि उनले सासूलाई दु’व्र्य’वहार ग’रे’की हुन् । शुक्रबार साँझ प्रहरी चौकी पुगेकी सासू अंशु जिन्दालले आफ्नो अनुहार र शरीरमा चो’ट ला’गे’को ब’ताइन् । उनको शरीर सु’न्निएको छ । उनी मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि रोगबाट पीडित छिन् । भा’इ’रल भिडियोमा देख्न सकिन्छ कि कविताले आफ्नो पतिलाई तिमीले ममाथि किन हा’त हा’ल्यौ भ’नेर ब’हस ग’रिरहेकी छिन् ।